လူမှုရေးအရှုတ်အရှင်းများ နဲ့ ငွေကြေးအရှုတ်အရှင်းများဖြင့် ရှုတ်ထွေးနေခဲ့သည့် အဆိုပါ Qing Minya ( ရှင်မင်းယာ ) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ တရုတ်ခြေဖ၀ါးအောက်ရောက်အောင် ကျူးကျော်စစ် ၃ ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ Qing ဆိုတဲ့ တရုတ်ဘုရင် ရဲ့ နာမည်ကို ဂုဏ်ယူ စွာနဲ့ အသုံးပြုနေတဲ့ သူ Qing Minya တစ်ယောက်
ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံကာ မ.ဘ.သ အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဟာ အာဃာတနှင့်အမုန်းတရားထားက မိစ္ဆာဝါဒသာဖြစ် »
Solonight Emparor w
Qing Minya)ရှင်မေ ယာ ) ဖွပြန်ပြီ
လူမျိုးရေး / ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖန်တီး လှုံ့ဆော်ခဲ့သည့် Qing Minya (.ရှင်မင်းယာ ) သည် ယခုတစ်ဖန် စစ်အာဏါရှင်များ၏ အရေးနိမ့် နေမှုများအပေါ် အဖတ်ဆယ်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး မလေးရှားမှ မဟုတ်မမှန်သတင်းများ လုပ်ကြံရေးသားနေကြောင်းတွေ့ရသည်။
လူမှုရေးအရှုတ်အရှင်းများ နဲ့ ငွေကြေးအရှုတ်အရှင်းများဖြင့် ရှုတ်ထွေးနေခဲ့သည့် အဆိုပါ Qing Minya ( ရှင်မင်းယာ ) သည် Eleven Media မှ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်၏ မွေးစားသား ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်း ( ဆရာဝန်ပေါက်စ ) နဲ့ ငြိစွန်းခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း စစ်တပ်မှ အကောင်ကြီးကြီးအမြီးရှည်ရှည်များနဲ့ အဆက်အသွယ်ရခဲ့ကြောင်း ခိုင်လုံသည့် သတင်းရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
Qing Minya ( ရှင်မင်းယာ ) သည် တရုတ်ကပြားမတစ်ဦးဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံနေ မောင်ရင်ဂျိမ်းခေါ် စစ်ခွေးလော်ဘီသည်လည်း တရုတ်ကပြားတစ်ဦးဖြစ်သည်။
စင်္ကာပူမှ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်၏ သားကြီး ဇော်နိုင်ဦးနဲ့ အတူတွဲရိုက်ထားသောဓါတ်ပုံများ တွေရပြီး မှူးဇော်နဲ့ စင်္ကာပူတွင် အရက်အတူ ထိုင်သောက်လေ့ရှိကြပြီး မောင်ရင်ဂျိမ်း နဲ့ Qing Minya ( ရှင်မင်းယာ ) မှ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးများ လုပ်ပြကာ ဒုဝန်ကြီး ဆီမှ လုပ်ငန်းပါမစ်များ ရရှိကြကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာတိုင်းဂျာနယ်တွင် အေးနေဝင်းရေးသားသည် ဟုဆိုကာ ဖော်ပြခြင်းခံရသည့် ဆောင်းပါးကို မောင်ရင်ဂျိမ်း ရှဲ့ဒိုးရေးပေးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး ၎င်း ၏မျိုးရိုးဂုဏ်ကို ဖော်ကျူးဖွဲ့နွဲ့ကာ ပါးပါးလေးလော်ဘီလုပ်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။( ဆောင်းပါးကို အေးနေဝင်း facebook wall တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်သည် )
အဆိုပါ Qing Minya ( ရှင်မင်းယာ ) သည် မလေးရှားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခဲ့စဉ် မလေးရှားနိုင်ငံ / Kuala Lumpur မြို့တော် / Pasar Sini အနီး ရခိုင် Refugee ရုံမှ အိမ်ထောင်သည် ဦးဦးသာလူချေ နဲ့လည်း လူသိရှင်ကြား ဖေါက်ပြန်ခဲ့သည်။
ကျုပ် ၎င်းရုံတွင် အဝင်အထွက်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်၍ ဦးဦးသာလူချေ နဲ့ Qing Minya ( ရှင်မင်းယာ ) တို့၏ ဖေါက်ပြန်ရေးဇါတ်လမ်းအား ကာယကံရှင် ဦးဦးသာလူချေ နဲ့ ဇနီးအရီးချေ တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ငှဲ့ကာ ထိန်းသိမ်းရေးသားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။
ယောက်ျားတကာဖြင့် ချစ်ပွဲဝင်နေသော အဆိုပါ Qing Minya ( ရှင်မင်းယာ ) ၏ဤအမျိုးသားရေးဟစ်ကြွေးနေမှုများသည် အော်ကလီဆန်စရာသာဖြစ်နေပါကြောင်း။
This entry was posted on June 28, 2014 at 10:54 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “လူမှုရေးအရှုတ်အရှင်းများ နဲ့ ငွေကြေးအရှုတ်အရှင်းများဖြင့် ရှုတ်ထွေးနေခဲ့သည့် အဆိုပါ Qing Minya ( ရှင်မင်းယာ )”